INONA NO ATAO HOE SHORTCUT KEYBOARD FOR STIKETHROUGH? - MALEFAKA
Inona no atao hoe Shortcut Keyboard for Stikethrough?
Navoaka tamin'nyNohavaozina farany: May 19, 2021
Matetika no tsy jerena amin'ny antontan-taratasy ny endri-javatra grevy. Ny endri-javatra, na dia mitovy amin'ny famafana teny iray aza, dia azo ampiasaina hanamafisana teny iray na hanome fotoana ny mpanoratra handinihana indray ny toerany ao amin'ny antontan-taratasy. Raha mampiasa strikethrough tsy tapaka ianao ary te hamolavola fomba haingana kokoa amin'ny fampiharana izany, dia vakio mialoha mba hahafantaranao ny hitsin-dàlana amin'ny fitendry.
Shortcut Kitendry samihafa ho an'ny Strikethrough ho an'ny sehatra samihafa
Fomba 1: Mampiasa Strikethrough amin'ny Microsoft Word amin'ny Windows
Fomba 2: Mampiasa Strikethrough Shortcut amin'ny Mac
Fomba 3: Shortcut keyboard ho an'ny Strikethrough amin'ny Microsoft Excel
Fomba 4: Manampy Strikethrough ao amin'ny Google Docs
Fomba 5: Mamely amin'ny alàlan'ny lahatsoratra amin'ny WordPress
Microsoft Word dia mora ny sehatra fanovana lahatsoratra malaza indrindra eran-tany. Noho izany, voajanahary fa maro ny olona nanandrana nampiasa ny endri-javatra grevy amin'ity sehatra ity. Amin'ny Windows, ny hitsin-dàlana ho an'ny grevy ho an'ny Microsoft Word dia Alt + H + 4. Ity hitsin-dàlana ity dia azo ampiasaina hamely lahatsoratra amin'ny Microsoft PowerPoint. Saingy misy fomba hafa ahafahanao mampiasa ny endri-javatra fitokonana ary manova mihitsy aza ny hitsin-dàlana mifototra amin'ny safidinao.
a. Sokafy ny antontan-taratasy Word tianao ovaina ary asongadino ny lahatsoratra tianao hampidirana grevy.
b. Ankehitriny mankanesa any amin'ny Toolbar, ary tsindrio eo ny safidy izay mitovitovy 'abc.' Ity no endri-javatra mitokona, ary hanova ny lahatsoratrao mifanaraka amin'izany.
Mety tsy ho hita ao amin'ny Toolbar-nao ny endri-javatra fitokonana. Na izany aza, azonao atao ny miatrika izany amin'ny fanarahana ireto dingana ireto:
a. Asongadino ny lahatsoratra ary miditra Ctrl + D. Hanokatra ny Fanamboarana endritsoratra boaty.
b. Eto, tsindrio ny Alt + K mba hisafidianana ny endri-javatra mitokona ary tsindrio avy eo 'OK.' Hisy fitokonana amin'izany ny lahatsoratra nofantenanao.
Raha tsy mety aminao ireo fomba roa ireo dia azonao atao ihany koa ny mamorona hitsin-dàlana manokana ho an'ny endri-javatra grevy ao amin'ny Microsoft Word:
1. Eo amin'ny zoro ambony havia amin'ny antontan-taratasinao Word, tsindrio ny ‘File.’
2. Avy eo, tsindrio ny Options eo amin'ny zoro ambany havia amin'ny efijery.
3. varavarankely vaovao mitondra ny lohateny hoe 'Safidy Teny' hisokatra eo amin'ny efijery. Eto, avy amin'ny tontonana eo ankavia, tsindrio ny Customize Ribbon .
4. Hisy lisitry ny baiko ho aseho eo amin'ny efijery. Eo ambanin'izy ireo dia hisy safidy mitondra ny lohateny 'Shortcuts keyboard: Customize'. Tsindrio ny bokotra amboary eo anoloan'ity safidy ity hamoronana hitsin-dàlana manokana ho an'ny baiko grevy.
5. Hiseho eto ny varavarankely hafa mitondra ny lohateny hoe ‘Customize Keyboard’, misy lisitra roa misaraka.
6. Ao amin'ny lisitra mitondra ny lohateny hoe Categories, safidio ny Home Tab.
7. Avy eo tsindrio ny lisitra mitondra ny lohateny hoe didy dia safidio ny Strikethrough.
8. Raha vao voafantina ny baiko dia midina any amin'ny ' Lazao ny filaharan'ny fitendry' tontonana ary ampidiro a hitsin-dàlana fitendry vaovao ao amin'ny 'Tsindrio ny fanalahidy hitsin-dàlana vaovao' textbox.
9. Ampidiro izay hitsin-dalana araka ny fahafahanao ary rehefa vita dia tsindrio ny ' Manome .’ Izany dia hamonjy ny hitsin-dàlana amin'ny fitendry ary hanamora ny fampiasanao ny endri-javatra grevy.
Ny baiko ao amin'ny Mac dia miasa amin'ny fomba hafa kely amin'ny an'ny Windows. Ny hitsin-dàlana fitendry ho an'ny grevy amin'ny Mac dia CMD + Shift + X. Raha hanova ny hitsin-dalana, ary afaka mampiasa ny dingana voalaza etsy ambony.
Excel dia iray amin'ireo rindranasa fitantanana data malaza indrindra eran'izao tontolo izao. Tsy toy ny Word, na izany aza, ny asa voalohany an'ny Excel dia ny manodinkodina sy mitahiry angona ary tsy manova lahatsoratra. Na izany aza, misy ny tsy fahombiazana hitsin-dàlana ho an'ny grevy ao amin'ny Microsoft Excel: Ctrl + 5. Fidio fotsiny ny sela na vondron'ny sela tianao hotapahina ary tsindrio ity baiko manaraka ity. Ny lahatsoratrao dia hampiseho ny fanovana mifanaraka amin'izany.
Jereo koa : Amboary ny hitsin-dàlana Windows Keyboard tsy mandeha
Google Docs dia mipoitra ho safidy fanovana lahatsoratra malaza noho ny fiasa sy ny endri-javatra an-tserasera. Ny endri-javatra grevy dia ampiasaina betsaka satria olona maro no mizara ny fandraisany, ary toy izay mamafa lahatsoratra, dia mamely azy izy ireo mba hojerena amin'ny ho avy. Miaraka amin'izany, ny Ny hitsin-dàlana fitendry ho an'ny grevy ao amin'ny Google Docs dia Alt + Shift + 5. Azonao jerena ity safidy fitokonana ity amin'ny fipihana eo Format > Text > Strikethrough.
Lasa hetsika lehibe amin'ny 21 ny bilaogysttaonjato, ary ny WordPress dia nipoitra ho safidy tian'ny CMS ho an'ny maro. Raha, amin'ny maha-bilaogera anao, tianao ho hitan'ny mpamaky ny ampahany amin'ny lahatsoratra iray nefa tianao ho fantatr'izy ireo koa fa tsy noraharahiana izany, dia mety tsara ny safidy fitokonana. Ao amin'ny WordPress, Shift + Alt + D ny hitsin-dàlana fitendry mitete.
Raha ampiasaina araka ny tokony ho izy, dia mety ho fitaovana mahery vaika ny endri-javatra fitokonana izay manampy ny haavon'ny matihanina amin'ny antontan-taratasyo. Miaraka amin'ireo dingana voalaza etsy ambony, dia tokony hifehy ny zavakanto ianao ary hampiasa azy io amin'ny fomba mora.
Ahoana ny fanoratana lahatsoratra ao amin'ny Google Docs
Ahoana ny fomba hanovana ny endri-tsoratra amin'ny WhatsApp
Fomba 2 hanovana ny sisiny amin'ny Google Docs
Fomba 3 hanampiana Album Art amin'ny MP3 ao Windows 10
Manantena izahay fa nanampy ity lahatsoratra ity ary fantatrao izao hitsin-dàlana fitendry samihafa ho an'ny fampiharana samihafa . Raha manana fisalasalana fanampiny ianao dia antsoy aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra, ary hofafanay ho anao izany.
Advait dia mpanoratra teknolojia tsy miankina izay manam-pahaizana manokana amin'ny fampianarana. Manana traikefa dimy taona amin'ny fanoratana fomba, hevitra ary fampianarana amin'ny Internet izy.